Ma aha caadi ahayn si aad u hesho telefoonada jir qaadan gaabis ah. Haddii aad ka heli hore phone HTC qaadan gaabis ah, waayadan dambe oo ugu dambeyntii la casriyeeyay in qalab cusub Android, waxaa jira fursad ah in xogta aad ka mid ah in farriimo muhiim ah, music, xiriirada iwm oo dhan ayaa weli ku jira ee aad taleefan jir. Haddii aadan rabin in ay lumiyaan xogta oo dhan, waxa aad u baahan doontaa in iyaga lagu wareejiyo si aad qalab cusub Android. Habka ugu badan oo ay tan u sameeyaan waa in ay ku xidhmaan waayeelba telefoonka HTC iyo qalabka cusub ee Android si aad u computer oo gacanta nuqul warbixinta ka soo baxday kaarka SD jir ah mid cusub. A fudud badan ayaa sheegay in ka badan samayn, gaar ahaan haddii aad tahay aniga oo kale, qof qaba xamuulka iyo culaysyo Culaysyadoodii la xidhiidhid, sawiro iyo fariimo ay telefoonka. Waxaad isticmaali doonaa waqti badan, guurin iyo fayl kala duwan ee kaararka SD, iyo habka ay seegeen badan oo iyaga ka mid ah sidoo kale. Sidaas, in muddo gaaban, aad ku joogi doonto wax badan oo waqti iyo dadaal iyo weli ma aakhirka shaqo wanaagsan.
In tahay in dhamaadka sheekadan? Ama, waa hab ka soo baxay? Waa hagaag, ha ii soo bandhigo in aad Wondershare MobileTrans . Isticmaalka qalab this, aad haatan wareejin karaan macluumaadka oo dhan ka telefoonka HTC jir in qalab cusub Android iyadoo hal click iyo in aad hab ammaan ah oo khatar la'aan 100% ah. Si fudud u dhaqaaqo wax walba, oo ay ku jiraan xiriiro, photos, music, video, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, oo dhan barnaamijyadooda iyo Guda wac, kula kaliya 1 click.
Talaabooyinka ay u guuraan xogta ka phone HTC in qalab Android
Talaabada 1: Xiriirka labada telefoonada, HTC iyo Android si aad u computer
Connect telefoonada si aad u your computer via fiilooyinka USB waqti isku mid ah. The MobileTrans qalab / barnaamijka iyaga lagu ogaan doonaa si toos ah ka dibna soo bandhigaan telefoonada ee "Source" iyo "Destination" sida. Hubi in aad haysato telefoonka HTC sida il iyo telefoonka cusub Android sida Ahaado. Hadda, arko in dhammaan waxa ku jira in aad rabto in aad guurtay waxaa loo hubiyaa in liiska la soo bandhigay dhinaca dhexe (eeg shaashadda ku lifaaqan).
Talaabada 2: wareejinta xogta ka HTC in qalab cusub Android
Hadda, si fudud riix "Start Copy" badhanka si ay u bilaabaan kala iibsiga ee content ka phone jir ah mid cusub. Marka geedi socodka la dhammeeyo, guji "OK" si loo soo afjaro kala iibsiga. Hubi in labada telefoonada ku xirnaado your computer wakhtiga oo dhan ama haddii kale waxaa suuro gal ah in aad ku dhammaan karaan inay kula soo gaartay xogta.
Sidaas, waxaa ay tahay, haatan waxaad dhammaan xogta ka hore phone HTC in qalab cusub Android si fudud ku wareejin karo iyo iyadoo la kaashanayo hal click. Happy wareejinta!
Sidaas, oo HTC dukaamada ayaad imika u isticmaali?
1. HTC Mid ka mid ah M9
2. HTC Mid ka mid ah M8
3. HTC Mid ka mid ah E8
4. HTC damcin Eye
5. HTC Mid ka mid ah M8 Windows
6. HTC Balanbaalis 2
7. HTC Mid ka mid ah X
8. HTC Mid ka mid ah S
9. HTC Droid Cajiib ah
10. HTC doonayay oo 610 4G
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in Android